ကျောပိုးအိတ်: January 2011
22:09 Posted by ကျောပိုးအိတ်
အနည်းဆုံးတော့ ဆုံစည်းဖို့အတွက်လား …
ကွန်ပျူတာကိုပိတ်… လက်ဆွဲအိတ်ထဲထည့်…အထုပ်အပိုးတွေကို သယ်ပိုး.. ဖြေးဖြေးခြင်းပိတ်သွားမဲ့ ဓါတ်လှေခေါးကြားကနေ ငါ့အခန်းလေးကို ဖြေးဖြေးခြင်း ခိုး ကြည့်… 5နှစ်တာ နွေးထွေးမှုတွေနဲ့… ငါ့အရိပ် တစိတ်တလေများ ကျန်ခဲ့လေဦးမလား…
ကားပေါ်ကိုတက်… ပြုတင်းပေါက်က ကြည့်တော့..။လမ်းမ တစ် လျှောက် ရော်ရွက်တွေက ဟိုနား.. ဒီနား.. ခပ်ဝါးဝါး ဖြစ်နေတာ ရွှေအိုရောင်…
ဆေးရုံကြီးရှေ့က ဖြတ်မောင်းတော့..ထိုင်းဘုရင် ဘူမိဘောက ငါ့ကိုကြည့်နေမလား .. ကြည်နူးတာလား.. ကြေကွဲတာလား .. အားပေးတာလား… တားနေလေရော့ သလား…
အိမ်ပြန်ရမတဲ့လား… ပျော်စရာကြီးဆိုပါလား… မျှော်နေကြသတဲ့လား.. ရင်ခုန်ရမတဲ့လား… သြော်…အိမ်ကိုပြန်ရမတဲ့လား…
ဌာနေကို မေလေ ပြန်ရတော့မယ်
21:14 Posted by ကျောပိုးအိတ်
ကျွန်မ ၂၈ . ၁ . ၂၀၁၁ မှာ မြန်မာပြည် အပြီး ပြန်ပါပြီရှင် .. မြန်မာပြည် ပြန်ရောက်ရင်တော့ ပို့ စ်တွေ ထပ်တင်ဖြစ်ပ့ါမလား ကျွန်မကိုယ်တိုင် မသေချာပါဘူး .. ဒီမှာနေခဲ့တုန်းက အိမ်မှာ အင်တာနက် တတ်ထားတာတောင် ပို့ စ်တွေ ပုံမှန်မရေးဖြစ်တဲ့ ကျွန်မက ဌာနေမှာရော ပုံမှန်ရေးနိုင်ပ့ါမလားလို့ကျွန်မတွေးနေမိပါတယ် ...
ဘာဘဲပြောပြောပါလေ .. ကျွန်မရေးခဲ့သမျှတွေကို (စာရေး မကောင်းမှန်း သိပေမယ့်) တကူးတကန့်လာရောက် ဝေဖန်ပေးကြတဲ့ ဘလော့ဂါ အကို .. အမ .. မောင်လေး .. ညီမလေးတွေကိုတော့ ကျွန်မ အမြဲ အမှတ်ရနေမှာပါ ..
ခုတော့ အပြီးပြန်ဖြစ်တော့မှာဆိုတော့ ပစ္စည်းတွေ သိမ်းဆည်းနေပါတယ် .. လုပ်အားပေးလေးများ လာကြမယ်ဆို တော်တော် ၀မ်းသာမိမှာ ..
အခုတော့ တစ်ယောက်ထဲ ....း(
17:14 Posted by ကျောပိုးအိတ်
ဖယောင်းတိုင် ၅တိုင်ရဲ့ အလင်းအားကြောင့် အခန်းသေးသေးလေးတစ်ခန်းဟာ လင်းလက်လို့နေပါတယ် .. အဲဒီအချိန်မှာ လေပြင်းက ရုတ်ကနည်းတိုက်လိုက်တာကြောင့် ဖယောင်းတိုင်၅တိုင်ထဲက ၁တိုင်ဟာ မီးငြိမ်းသွားခဲ့ပါတယ် ..
ပထမဆုံး မီးငြိမ်းသွားတဲ့ ဖယောင်းတိုင်ကို ကျွန်မက အချစ်ဖယောင်းတိုင်လို့နာမည်ပေးချင်ပါတယ် .. အချစ်ဖယောင်းတိုင် ညိမ်းသွားတာကြောင့် အခန်းထဲမယ် အလင်းအားက နဂိုကထက်စာရင် လျှော့နည်းသွားတာကို တွေ့ ရပါတယ် ..
ကျွန်မတို့ ဘ၀မှာ အချစ်ဆိုတာသာ မရှိခဲ့ရင် ကျွန်မတို့ ရဲ့ ဘ၀မှာ အမှောင်ကျမှာ သေချာပါတယ် .. အချစ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ မိသားစုချစ်တာတွေ .. ဇနီးမောင်နှံချစ်တာတွေ .. သူငယ်ချင်းချစ်တာတွေ .. လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ချစ်တာတွေ အဲဒါတွေ အားလုံးပါဝင်ပါတယ် ..
အခန်းထဲမယ် နောက်ထပ် အလင်းတိုင် ၄တိုင်ဟာ လေယူရာကို ယိမ်းနွဲ့ လို့ နေပါတယ် .. လေပြင်းက နောက်တစ်ချက် တိုက်လိုက်တာကြောင့် ကျန်နေတဲ့ ဖယောင်းတိုင် ၄ တိုင်ထဲကနေ နောက်ထပ် ၁ တိုင်ရဲ့ မီးဟာ ငြိမ်းသွားခဲ့ရပြန်ပါတယ် …
ဒုတိယ ငြိမ်းသွားတဲ့ ဖယောင်းတိုင်ကို ကျွန်မက မေတ္တာဖယောင်းတိုင်လို့နာမည်ပေးချင်ပါတယ် .. မေတ္တောဖယောင်းတိုင် ငြိမ်းသွားတာကြောင့် အခန်းထဲမယ် အလင်းအားက နဂိုကထက်စာရင် ပိုလျှော့နည်း သွားတာကို တွေ့ ရပါတယ် ..
ကျွန်မတို့ ရဲ့ ဘ၀မှာ မေတ္တာတရားသာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် တစ်ပါးသူရဲ့လိုအပ်ချက်တွေ .. တစ်ပါးသူရဲ့ဝမ်းနည်းမှုတွေ .. တစ်ပါးသူရဲ့ကြေကွဲမှုတွေ အားလုံးကို မျက်ကွယ်ပြုမိကြမှာပါ ..
အခန်းထဲမယ် နောက်ထပ် အလင်းတိုင် ၃တိုင်ဟာ လေယူရာကို ယိမ်းနွဲ့ လို့ နေပါတယ် .. လေပြင်းက နောက် တစ်ချက် တိုက်လိုက်တာကြောင့် ကျန်နေတဲ့ ဖယောင်းတိုင် ၃တိုင်ထဲကနေ နောက်ထပ် ၁ တိုင်ရဲ့ မီးဟာ ထပ်ငြိမ်း သွားခဲ့ရပြန်ပါတယ် …
တတိယ ငြိမ်းသွားတဲ့ ဖယောင်းတိုင်ကို ကျွန်မက ဂရုဏာဖယောင်းတိုင်လို့နာမည်ပေးချင်ပါတယ် .. ဂရုဏာဖယောင်းတိုင် ငြိမ်းသွားတာကြောင့် အခန်းထဲမယ် အလင်းအားက နဂိုကထက်စာရင် ပိုပြီး လျှော့နည်း သွားတာကို တွေ့ ရပါတယ် ..
ကျွန်မတို့ ရဲ့ ဘ၀မှာ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ ဂရုဏာတရားသာ ကင်းမယ့်နေမယ်ဆို လူလူခြင်း ခေါင်းပုံဖြတ်မှုတွေ .. ရက်စက်မှုတွေ များလာမှာ အမှန်ပါဘဲ ..
အခန်းထဲမယ် နောက်ထပ် အလင်းတိုင် ၂တိုင်ဟာ လေယူရာကို ယိမ်းနွဲ့ လို့ နေပါတယ် .. လေပြင်းက နောက်တစ်ချက် တိုက်လိုက်တာကြောင့် ကျန်နေတဲ့ ဖယောင်းတိုင် ၂တိုင်ထဲကနေ နောက်ထပ် ၁ တိုင်ရဲ့ မီးဟာ ငြိမ်းသွားခဲ့ရပြန်ပါတယ် …
စတ္ထုထ ငြိမ်းသွားတဲ့ ဖယောင်းတိုင်ကို ကျွန်မက မုဒိတာဖယောင်းတိုင်လို့နာမည်ပေးချင်ပါတယ် .. မုဒိတာဖယောင်းတိုင် ငြိမ်းသွားတာကြောင့် အခန်းထဲမယ် အလင်းအားက နဂိုကထက်စာရင် အရမ်းကို လျှော့နည်းသွားတာကို တွေ့ ရပါတယ် ..
ကျွန်မတို့ ရဲ့ ဘ၀မှာ မုဒိတာ တရားသာ ကင်းမဲ့နေမယ်ဆိုရင် အရာရာမှာ မနာလိုမှုတွေ .. နောက်ကွယ်မှာ ကြံစည်မှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေမှာ အမှန်ပါဘဲ ..
နောက်ဆုံးတော့ ဖယောင်းတိုင်လေး တစ်တိုင်သာ အခန်းထဲမယ် ကျန်နေခဲ့ပါတယ် .. နဂိုအလင်းရောင်ထက် အားနည်းလွန်းတဲ့ အခန်းထဲမယ် နောက်ဆုံးလက်ကျန် ဖယောင်းတိုင်လေးတစ်တိုင်သာ အထီးကျန်စွာ ကျန်နေခဲ့ပါတယ် ..
နောက်ဆုံးကျန်ခဲ့တဲ့ ဖယောင်းတိုင်လေးကို ကျွန်မက လိုအပ်ချက်ဖယောင်းတိုင်လို့နာမည်ပေးချင်ပါတယ် .. ဒီလိုအပ်ချက် ဖယောင်းတိုင်လေး တစ်တိုင်ကသာ တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ ချစ်ခြင်း .. မေတ္တာ .. ဂရုဏာ .. မုဒိတာတွေကို တဖန်ပြန်ပြီး ထွန်းညှိပေးမယ်ဆိုရင် လောကမှာ အလင်းအား အကောင်းဆုံး ဖယောင်းတိုင် တစ်တိုင် ဖြစ်လာမှာ မလွဲပါဘူး ..
ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ ရဲ့ ဘ၀မှာ လိုအပ်နေတဲ့ နေရာတိုင်းမှာ အသီးသီးသော အလင်းတိုင်များ ထွန်းလင်းနိုင်ပါစေလို့..
စကားလက်ဆောင် .. :D :D
ကျွန်မရဲ့ မှတ်တမ်း (21)
ချစ်သူနားဆင်ဘို့(1)
တဂ်ပို့ စ် (2)
မွေးနေ့ ဆုတောင်း (4)
ခုတလော နားထောင်ဖြစ်တဲ့ သီချင်းလေးပါ
" မငျး အားမငယျနဲ့ မငျးနဲ့အတူငါရှိတယျ "
Loves for love
ωДЯɱԼў ωƐԼϾσɱƐ Շσ ɳДў Լўɳɳ'ֆ βԼσɠ